Semalt: WordPress Themes Uye Frameworks
Kune vese vashandisi veShokoPress itsva, basa rekusarudza nhepfenyuro yakanaka inowanzova mutambo-kuchinja. Kungofanana nenzira inowanzoshandiswa yekushandisa zvinyorwa, kushandiswa kwechinyorwa chitsva chewebsite yehupenyu kunofadza. Mabhizinesi mazhinji ari kusarudza nzvimbo yepaIndaneti seyo nzira itsva yekutsvaga. Muzviitiko izvi, vanhu ava vanosarudza kutsvaga chinyorwa chakanaka cheShokoPress. Mune dzimwe nguva, vanhu vanosarudza kushandisa zvinyorwa pamusana pekugadzirisa nyaya kana kunyange nyaya dzakagadzirwa - oculos redondo espelhado rosa ray ban. Munhu anogona kuvhara matambudziko ose aya kuburikidza nekusarudza uye kushandiswa kwetsika yakakodzera ye WordPress. Mhemberero dziri nyore kushandisa uye kuwedzera. Uyezve, vashandisi vanogonawo kuwedzera maitiro avo nekuisa WordPress plugin iyo inogona kuita kuti webhusaiti yose iwane tweaks chaiyo.
Ivan Konovalov, nyanzvi inotungamira kubva Semalt , anovimbisa kuti zvose zvinyorwa zveShokoPress hazvisi zvakafanana. Kune zvinyorwa zvakasiyana zvakagadzirirwa mawebsite emhando dzakasiyana. Vashandi vakasiyana vanogona kuita mabasa akasiyana-siyana kuburikidza vachishandisa misoro yakasiyana. Muchikamu chino, vashandisi vatsva vane nguva yakaoma pakusarudza pakati peShokoPress temaiti, kana shanduro yetimukati ye WordPress. Zvinotambudza kusarudza kunyanya kana munhu akawana mhando dzose dzemashoko mukutsvaga kwavo. Uyezve, webhusaiti yako inogona kuva nzvimbo yakanyanya kunyanya kana iwe uchishandisa zvidzidzo zvevana. MuShokoPress, pane nyore-kutevera mirayiridzo pamusoro pehurukuro yekusarudza pane chinangwa chaicho..Zviri nyore kunzwisisa tsanangudzo dzavo chaiyo pamwe nemashoko avo uye mazano. Munyaya iyi SEO, pachava nenzira dzakasiyana dzekunzwisisa nzira iyo idzi mbiri dzinoshanda. Uyezve, pane zvichange zvichitsanangurwa kune imwe neimwe yezviitiko.
WordPress Theme Framework: A WordPress zvinyorwa zvinogona kureva chimwe chezvinhu zviviri:
Kuwedzerwa kwechinyorwa chezvino chiripo chinogona kushandiswa mukusimudzirwa kwechinyorwa chaicho kana kuti codex chaiyo yechinyorwa chinotanga kunogona kuwedzerwa pane imwe nheyo kuti iite mabasa ayo akasiyana, kana kuti ishandiswe seimwe template yemusoro.)
Musoro Wemwana: Nyaya iyi haina kukwana, seyiyi musoro wemubereki. Muchikamu chemwana, panofanira kuva nemusoro wemubereki unoita basa rewebsite yehutano. Uyezve, inowedzera pane iyo maitiro nemaitiro, izvo zvisingashandisi apo misoro yemubereki inovandudza.
Kukwanisa kudzora zvinyorwa zvitsva, iwe unofanirwa kudzidza nzira iyo musoro wako mubereki unoshanda. Mune zvimwe zviitiko, vanyori veShokoPress vanoramba vachibudisa zvinyorwa zvemashoko avo. Mune zviitiko izvi, iwe unogona kutora musoro wechechi uyo ucharamba uchishanda mukuvandudza. Yeuka kuti kana zvinyorwa zvitsva, zvinyorwa zvayo zvine chokuita nehurukuro zvinochinja. Iwe unogona kutarisira mwana wemutambo unotendwa kuitira kuti uchengetedze kuchinja uku.
Mafambiro akasiyana nezvishandiso zvemashizha. Zvisinei, chinyorwa chemashizha chinoshanda senzvimbo inosimudzirwa yewebhu web template. Inoshanda kuiswa mune imwe nyaya yakasiyana asi kwete kushandiswa sehurukuro pachayo. A WordPress mhemberero yemubereki anogona kushanda 'kunze kwebhokisi,' asi chinyorwa chemashoko chinogona kudikanwa musoro wevana kuti uve basa rakakwana. Inogona kuve yakakosha kushandisa WordPress plugin pamusoro pehurukuro yakakwana.